नारायानी अस्पतालको निकम्मापन, खाना खुवाउन समेत संघ संस्थासँग गुहार – BANKE POST
Posted on May 18, 2020 May 18, 2020 Author Hari Adhikari	Comment(0)
वीरगंज ५ जेष्ठ। नारायणी अस्पताल र सिद्दार्थ माध्यमिक विद्यालयको आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितहरुलाई सामाजिक संस्था सानो पाइलाले खान र खाजा खुवाउन थालेको छ ।
वीरगञ्जमा लगभग डेढ दसकदेखि सामाजिक क्रियाकलाप गर्दै आएको सामाजिक संस्था सानो पाइलाले नारायणी अस्पताल र सेमी आइसोलेसन सिद्दार्थ माविमा रहेका कोरोना संक्रमितहरुलाई सोमबार देखि खान र खाजा खुवाउन थालेको हो ।
अस्पताल प्रशासनले कोरोना संक्रमितहरुलाई गुणस्तरहिन र अस्वास्थ्यकर खाना खुवाउदै गरेको गुनासो आउन थालेपछि खाना खुवाउने जिम्मा सानो पाइलाले लिएको छ ।
स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र अस्पताल प्रशासनको समन्वयमा साेमबार बिहान पहिलाे पटक नारायणी र सिद्दार्थ माविकाे क्वारेन्टीनमा रहेका विरामीहरूलाइ नास्ता पस्किएकाे सानाे पाइलाका सञ्चालन प्रमुख जय साहले जानकारी दिए ।
स्वस्थकर खाना खान पाउँदा बिरामी हर्षित छन् । काेराेनासँग लड्न राेग प्रतिराेधात्मक क्षमता बलियाे पार्न पनि स्वस्थ खाना अत्यावश्यक भएको पोषणविदहरुको भनाई छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले उपलब्ध गराएको मापदण्ड अनुसार संक्रमितहरुलाई खान उपलब्ध गराइएको साहले बताए ।
नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका कोरना संक्रमितहरुले अस्पताल प्रशासनले उपलब्ध गराएको खान खाएर उल्टै थप बिरामी हुने गुनासो गरेका थिए । कोरोना संक्रमित मध्येका एक पत्रकार सुरेश बिडारिले चाउचाउ खाएको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा हाले देखि अस्पताल प्रशासनको व्यवस्थापन माथि थप प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।
अस्पताल प्रशासन त्यसैगरी सरसफाई र कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा समेत चुकेको आइसोलेसनमा भर्ना रहेका संक्रमितहरुले बताउदै आएका छन् । वीरगञ्ज कोरोना संक्रमणको हट्स्पट बन्दै जाँदा समेत अस्पताल प्रशासनले व्यस्थापन पक्षमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसके पछि सरोकारवालाहरुले अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्यायको कार्या क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
गुणस्तरिय खाना खुवाउन नसक्ने नारायणी अस्पतालले कोरोना संक्रमितहरुको उपचार कसरि गर्ला भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । अस्पतालले कोरोना संक्रमितहरुका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको खानामा समेत भ्रष्टाचार भएको कुरा सतहमा आएको छ ।
कोरोनाको महामारीमा समेत अस्पताल प्रशासन व्यस्थापन पक्षमा कम्जोर देखिएको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन् । यस सन्दर्भमा अस्पतालका मेसु डा. मदन उपाध्यायसँग पटक-पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उनले फोन उठाएनन् ।
दाङका कोरोना संक्रमित पुरुषको बाँकेको कोहलपुरमा मृत्युु,१९ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज
मंसिर०३-बिहिवार दाङका कोरोना संक्रमित पुरुषको कोहलपुरमा मृत्युु भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ का ७९ वर्षीय पुरुषको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारका लागि ल्याएको डेढ घण्टामै बुधवार बिहान २ बजे मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए । कात्तिक २१ गते कोरोना पुष्टि भएका उनी होम आइसोलेसनमा बसेका थिए […]
२ बैशाख, नेपालगन्ज । सरकारले हाल जारी लकडाउनलाई बैशाख १५ गतेसम्म थप्‍ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठककले चैत ११ देखि जारी लकडाउनलाई बैशाख १५ सम्म थप्‍ने निर्णय लिएको हो। यसैगरी बैठकले बैशाख १८ गतेसम्मका लागि सीमानाका बन्द नै राख्‍ने निर्णय गरेको छ। सरकारले यसअघि नै बैशाख १८ सम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय […]
नेपालको ठूलो तथा चर्चित सुपर मार्केट ‘भाटभटेनी सुपर स्टोर आज बाट संचालनमा आउने